नेपालको राजनीतिमा नैतिकवान, इमान्दार र स्वच्छ छविका नेताको खडेरी परिरहेकै बेला नवीन्द्रराज जोशी हामीबीच रहनु भएन । सादा जीवन, उच्च विचारका धनी जोशी नेपाली कांग्रेसको
प्रकाशित मिति : ४ weeks अगाडि
सीता जन्मभूमि जनकपुरमा जन्मिएको हुँदा आमाको नाम मिथिला रह्यो । बुवा दशरथमान सिंहसँगको विवाहपछिको दाम्पत्य जीवन पूर्ण, सफल र सार्थक रह्यो । उहाँको चार छोरा क्रमशः धरणी, रामचन्द्र, डा. बालकृष्ण
काठमाडौँ । कवि अनिता लामा सामाजिक र राजनीतिक विषयमा चोटिला कविताहरू लेखिरहन्छिन् । समसायिक घटनाहरूले उनलाई तत्क्षण छुन्छन् र सिर्जना कोरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहाल्छिन् । ‘समर्पण’, ‘अर्पण’ र ‘आतुङ’
काठमाडाैं । संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र सेन्सर बोर्डमा पाँच सदस्य नियुक्त गरेको छ । सरकारले रिक्त रहेको चलचित्र विकास बोर्ड सदस्यमा अर्जुन कुमार डंगोल, प्रकाश
प्रकाशित मिति : २ months अगाडि
कसरी निर्क्यौल गरियो होला, पैताला यहीभित्र राख्नु पर्छ भनेर ? कसले भन्यो होला, पैतालालाई दौडाउने रेखालाई बाटो नाम दिऊ भनेर ? अँ, कसले बनायो होला, पहिलो पल्ट बाटो ? के
प्रकाशित मिति : ३ months अगाडि
सत्यनारायण फैजुलाई मैले २०३५/३६ को शिक्षक आन्दोलनको क्रममा चिनेकी हुँ । उनको सम्पर्क शुशीलचन्द्र अमात्यमार्फत भएको थियो । उनकोे घर सूर्यविनायक, जगाते नजिकैको भातेढिकुरमा पर्दछ । हामी शिक्षक आन्दोलनका धेरैवटा
नेपालमा संसद् विघटनको इतिहास २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । जब शासकहरु स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछन्, अनि उनीहरु निरंकुश बन्दै जान्छन् । २०१७ सालमा राजा
काठमाडौं, १० माघ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको लकडाउन सस्मरण लेखन प्रतियोगितामा बाबुराम न्यौपाने उत्स झापा प्रथम, पवित्रा अधिकारी, काठमाडौँ दोश्रो र सम्झना निरौला काठमाडौ, तृतीय
– लक्ष्मण देवकोटा ‘चुँडे राष्ट्रिय दौराका, खुकुला ती तुनाहरु झिक्दैछन् अब पाखण्डी, तन्त्रमन्त्र टुनाहरु म हुँ आगो, म हुँ बिजुली, म हुँ बाढी, म हुँ हुरी हुर्कन्छु अब हुर्रिन्छु, चल्दैनन्
भनिन्छ, ‘रिस खा आफूलाई, बुद्धि खाँ अरुलाई’ यो भनाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ । माधव–प्रचण्डसँगको रिसले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनी पछुताउनुको विकल्प छैन । नेपाल